Pique: Qas wadeyaal ayey ahaayeen ciyaaryahanada waa weyn ee Manchester United! – Gool FM
Pique: Qas wadeyaal ayey ahaayeen ciyaaryahanada waa weyn ee Manchester United!
Kaafi June 10, 2016
(Paris) 10 Juunyo 2016. Daafaca Barcelona Gerard Pique ayaa sheegay in ciyaaryahanadii waa weynaa ee Manchster United ay ahaayeen kuwo ‘Qas wadeyaal ah” markii uu isku dayey in uu safka kowaad ka mid noqdo.
Laacibka Spain waxa uu ka mid noqday United isaga oo 17 sano jira kahor inta uusan ku laaban Barcelona 2008.
Waxa uu wareysi ku saabsan sida da’yarta ula qabsadaan xulka Spain siinayey Onda Cero.
29 jirka waxa uu sheegay in axwaasha is badashay tan iyo yaraantiisii Old Trafford.
“Si fiican ayey hada ula qabsadaan, ma aha sidii hore oo kale,” “Markii aan 17 ilaa 18 jirka ahaa waxaan isku dayey in aan ka mid noqdo kooxda kowaad ee Manchester, aad ayey u adkeyd, ciyaaryahanada waa weyn qurun ayey ahaayeen.
“Hada kaftan yar ayaad sameeneysaa waxa ayna u ekeeneysaa sida in aad dambi gashay. Waxaan xusuustaa markii uu Gerard Deulofeu ka mid noqday kooxda kowaad, casho ayuu aadayey waxaana ka leexiyey kursiga, wuu kufay waana la I canaantay. Anaga maalin walba wey nagu sameyn jireen!
Pique waxa uu United la qaaday Premier League iyo Champions League kahor inta uusan 23 koob oo waa weyn la hanan Catalan.
De Gea: Wax aan kala socdo ma jiraan xiisaha Real Madrid
10 Ciyaaryahan oo dheelaya Euro 2016 lagana yaabo in ay Premier League kal dambe ka ciyaaraan!